ရသာချို: "ပုဇွန်အ၀ါရောင်ဟင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့"
Posted by ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး at 8:39 PM
မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပါရမီလေး ချစ်တဲ့
ခင်ပွန်း မိသားစုအားလုံးနဲ့ အမြဲဆင်နွဲနိုင်ပါစေ။
ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀တထပ်တည်းကျပါစေ။ သားသားမီးမီးတွေ
အများးးးးးးးးးးးးးးး ကြီးရပါစေး)
Oh...you are also October born!! Happy Birthday to you. Wish you all the best.
Whatacoincidence!! I bought also skin care product from Body Shop, ginger shampoo. It was also discount for my birthday :)))
လိမ္မာတဲ့ ပါရမီလေးကို အားလုံးကချစ်ကြတာမဆန်းပါဘူးကွယ်။ ဒို့ မွေးနေ့ တုန်း ကလည်း ဘော်ဒီရှော့ က ဒစ်စကောင့်ရတယ်။ အဲဒီနေ့ မှာ မင်ဘာကဒ်လုပ်လိုက်တာ နောက်နှစ်မွေးနေ့ ကျတော့ အိတ်တလုံးနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖရီးလက်ဆောင်ရတယ်။ မမှတ်တော့ဘူး အစိတ်လားမသိဘူးပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းတွေ က အများကြီးပိုတန်တယ်။ လေး ငါး မျိုး လည်းရွေး လို့ ရတယ်။ နောက်တော့ ပျောက်သွားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကဒ်ပါသွားလို့ ထပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
Happy Birthday ပါ ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးရေ
ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ နားလည်စာနာခြင်းတို့ဖြင့် ချစ်ခင်သူများနဲ့ တစ်သက်တာပတ်လုံး မခွဲမခွာ နေခွင့်ရပါစေလို့နော်..
ပုဇွန်ဟင်းလေးက မွှေးနေတာပဲ .. :)